Aya Mazano Anobatsira Anobatsira Iwe Kuti Ubhadharwe Mushure me Tsaona Yemota - Nhau Dzemagariro Zuva Nezuva
Wepamusoro 8 TikTok Hacks ekukubatsira iwe kuwana mamwe Mafaro
Aya Mazano Anobatsira Anobatsira Iwe Kuti Ubhadharwe Mushure meA...
Aya Mazano Anobatsira Anobatsira Iwe Kuti Ubhadharwe Mushure Yetsaona Yemota
1 mwedzi kare 1 mwedzi kare
by SND Team 1 mwedzi kare 1 mwedzi kare
Kana wakambopinda mutsaona yemotokari, unoziva kuti inogona kuva chiitiko chinoshungurudza zvikuru. Kwete chete iwe uri kubata nekukuvadzwa kwemuviri uye mupfungwa kubva mukuputsika, asi iwe unofanirwa kubata nekunetsekana kwekubata nemakambani einishuwarenzi nemagweta. Izvi zvinogona kunge zvakanyanya kukurira, kunyanya kana iwe usiri kujairana nemaitiro. Ndosaka takaisa pamwechete iyi runyoro rwematipi ekukubatsira kuti ubhadharwe mushure metsaona yemotokari.
Nyora Chiitiko cheNjodzi ASAP
Kana iwe wakambopinda mutsaona yemotokari, chimwe chezvinhu zvinonyanya kukosha zvaunogona kuita kunyora chiitiko chetsaona nekukurumidza sezvinobvira. Izvi zvinoreva kutora mifananidzo yekukuvadzwa kwemotokari yako, kuwana ruzivo rwezvapupu, uye kuve nechokwadi chekuti wawana chirevo chemapurisa. Aya magwaro achave akakosha kana yasvika nguva yekuisa chikumbiro cheinishuwarenzi kana mhosva yekukuvadzwa kwako. An Oakland-based law firm inokurudzira kuti utore matanho aya nekukurumidza mushure mengozi. Zvadaro, iwe unogona kutarisa pakupora kwako pasina kunetseka nezve izvo zviri pamutemo.
Tsvaka Kutarisirwa Kuchipatara
Kana iwe wakakuvadzwa mutsaona yemotokari, zvakakosha kuti utsvake kurapwa nekukurumidza. Kunyange kana kukuvara kwako kuchiita sekudiki, zvakakosha kuti vatariswe nachiremba. Izvi hazvirevi chete kuti iwe unogamuchira kurapwa kwakakodzera kwekukuvadzwa kwako, asi zvichagadzirawo rekodhi yekukuvara kwako iyo ichave yakakosha kana ukasarudza kuisa chikumbiro chako chekukuvara.
Kana iwe ukamirira kwenguva yakareba kuti uone chiremba, kambani yeinishuwarenzi inogona kuedza kukakavara kuti kukuvara kwako hakuna kunyanyisa sezvaunotaura kana kuti aive mamiriro ekare. Naizvozvo, zvakakosha kutsvaga kurapwa nekukurumidza uye kutevedzera mirairo yachiremba wako maererano nekurapwa kwako.
Kune huwandu hwekukuvara kwakasiyana kwaunogona kutambura mutsaona yemotokari. Zvimwe zvezvakajairika zvinosanganisira whiplash, concussion, mapfupa akatyoka, uye kukuvara kwenyama yakapfava. Nekudaro, iwe unogona zvakare kutambura nekukuvadzwa kwakakomba sekukuvara kwehuropi kana kukuvara kwemusana.
Wana Kugadziriswa Kwekufungidzira Kwekuparara Kwepfuma
Kana iwe wanga usiri kukanganisa mutsaona, kambani yeinishuwarenzi yemutyairi ndiyo inofanirwa kugadzirisa mota yako. Nekudaro, ivo vanogona kuyedza kukupa iwe lowball fungidziro yekugadzirisa. Izvo zvakakosha kuti iwe utore ako efungidziro kubva kune ane mukurumbira auto body shops. Izvi zvinoita kuti uve nechokwadi chekuti waripwa zvakaringana nekukuvadzwa kwemotokari yako.
Kambani yeinishuwarenzi inogonawo kuedza kukudzikisira kukosha kwemotokari yako. Kana mota yako yakazara mutsaona, ivo vanokupa iyo Kelley Blue Book kukosha kwemota yako. Nekudaro, iyi inogona kunge isiri iyo chaiyo inomiririra yeicho mota yako yakakosha. Iwe unogona kuwana maonero echipiri pamusoro pekukosha kwemotokari yako kubva kune mutengesi ane mbiri.
Iva nemoyo murefu, unyanzvi, uye Shivirira
Iwe unogona kunge uchinetseka kuti nzira yacho ipere uye gamuchira muripo wako, asi zvinokosha kuva nemwoyo murefu. Iyo kambani yeinishuwarenzi inogona kuedza kukumisa kana kudzikisa-bhora iwe, asi kana iwe uine moyo murefu uye uchitevera matipi mune ino blog positi, iwe unozopedzisira wawana izvo zvaunofanirwa.
Zvakakoshawo kuve nyanzvi paunenge uchitaurirana nekambani yeinishuwarenzi. Unogona kugumbuka, asi yeuka kuramba wakadzikama uye une hunhu. Pakupedzisira, shingirira. Kana uchinzwa sokuti hapana kwaunosvika, usakanda mapfumo pasi. Ramba uchitevera nekambani yeinishuwarenzi kusvika wawana muripo waunokodzera.
Kana wakambopinda mutsaona yemotokari, chimwe chezvinhu zvokutanga zvaunofanira kuita kutaura negweta. Gweta rine ruzivo rwekukuvara kwemunhu richaziva kubata nemakambani einishuwarenzi uye kuwana muripo unokodzera. Usayedze kubata zvese uri wega - rega nyanzvi ikubatsire kufamba muhurongwa hwemutemo uye uwane mari yaunofanirwa kuwana.
Magweta mazhinji ekukuvadzwa ega achabata nyaya yako panjodzi, zvinoreva kuti vanobhadharwa chete kana ukakunda. Urongwa uhwu hunokupa iwe mukana wekuti uve nenyanzvi ine ruzivo kudivi rako usinganetseke nemitengo yepamberi. Vanhu vazhinji havazivi kuti vanokwanisa kutenga gweta mushure metsaona – asi nemuripo wekukurumidza, hapana chinorasikirwa nekutaura kune mumwe chete.
Mukupedzisa, kana wakambopinda mutsaona yemotokari, pane zvinhu zvishoma zvaunofanira kuita kuti uve nechokwadi chokuti wakaripwa zvakaringana nokuda kwekukuvara kwako uye kukuvara. Kutanga, tsvaga kurapwa pakarepo uye tevera mirairo yachiremba wako. Tevere, tora fungidziro dzekugadzirisa dzekukuvadzwa kwepfuma yako kubva kune vane mukurumbira auto body shopu. Pakupedzisira, iva nemoyo murefu, nyanzvi, uye shingirira paunenge uchibata nekambani yeinishuwarenzi.
9 Kurumidza Tekiniki dzekuwedzera Yako Yaunofarira YouTube
by SND Team 6 maawa apfuura 6 maawa apfuura
Nzira Yekufambisa Imba Yako Pasina Kupisa Gomba Muhomwe Yako?
by SND Team 1 zuva kare 1 zuva kare
ISMS certification yakavakirwa pachiyero chipi?
Zvinhu zvishanu Zvaunofanirwa Kutsvaga mune Online Maths Tutor
by SND Team 2 mazuva apfuura 2 mazuva apfuura